Ahoana ny fametrahana horonan-tsary mihetsika haingana amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fametrahana horonantsary mihetsika haingana amin'ny Mac
Ignatius Room | | Programa Mac, Tutorials
Ny horonan-tsary momba ny fianakaviana dia tsy azo leferina, afa-tsy rehefa anao manokana. Tsy misy olona tia mandeha mitsidika namana mba hahitany ny zava-drehetra sary sy horonan-tsary nalainao tamin'ny fialan-tsasatra farany nataonao. Rehefa antsika ireo video ireo dia raha te hanao vidéo famintinana isika dia tsy maintsy mijery ora sy ora (miankina amin'ny isan'ny horonan-tsary noraketinay) mba hahitana ny atiny tiana hozaraina.
Mba hanamora kokoa ity asa ity, ary indrindra haingana kokoa, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mametraka ireo horonan-tsary ao anaty fakan-tsary haingana, mba hahitana mora foana ny fotoana tena tiantsika ampidirina amin'ny fanangonanay. Raha tianao ho fantatra Ahoana ny fametrahana horonantsary mihetsika haingana amin'ny Mac, Manasa anao aho hamaky hatrany.
Lafin-javatra iray tsy maintsy dinihintsika rehefa mametraka horonan-tsary mihetsika haingana no tanjona. Izany hoe, raha te-hanafaingana ny horonan-tsary fotsiny isika mba hahitana ny fotoana tiantsika hampidirina na raha mifanohitra amin'izany, dia tiantsika ny hanafaingana ny horonan-tsary ary tehirizina toy izao, izany hoe accelerated.
Ny horonan-tsary mihetsika haingana dia afaka mamorona, amin'ny fotoana maro, fotoana mahatsikaiky izay, amin'ny hafainganam-pandeha mahazatra, dia tsy misy dikany na fahasoavana, ka raha tsy nieritreritra an'io safidy io ianao dia tokony horaisinao izany.
3 Tapaka mahafatifaty
Tsy maintsy miresaka momba ny iMovie, tonian-dahatsary maimaim-poana an'i Apple indray isika, raha tsy maintsy miasa amin'ny horonan-tsary. Miaraka amin'ny iMovie, tsy vitan'ny hoe afaka manafaingana ny playback ny horonan-tsary, fa koa afaka mitahiry ireo horonan-tsary haingana hilalao amin'ny mpilalao rehetra.
iMovie dia mamela antsika ovao ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary, antsoina hoe clips ao amin'ny app, tsy miankina. Izany hoe, tsy ilaina ny manova ny hafainganam-pandehan'ny playback tsy miankina amin'ny horonan-tsary tsirairay, manondrana azy ary ampio amin'ny horonantsary famintinana izay ataontsika.
Raha te hanova ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsarimihetsika amin'ny iMovie isika, ny zavatra voalohany tokony hatao dia safidio ny clip resahina.
Avy eo dia haseho ny menio safidy, menu izay ahafahantsika manao asa fanitsiana miaraka amin'io video io. Ao amin'io menu io dia tsy maintsy tsindrio eo amin'ny kisary mampiseho speedometer ary mampiseho ny anarana Speed.
Avy eo dia hisy sakafo vaovao hiseho. Ao amin'io menu io, ao amin'ny safidy hafainganam-pandeha, dia tsy maintsy milalao amin'ny toe-javatra samihafa isika mandra-pahitantsika ny hafainganam-pandeha mety tadiavintsika.
Ny fiovana rehetra ataontsika azo averina izy ireo, na dia mitahiry ny tetikasa aza izahay, mba ahafahantsika manandrana ny safidy rehetra mahaliana antsika mba ho afaka hanafaingana na hampiadana ny fandefasana horonan-tsary.
Rehefa milalao ny horonan-tsary haingana kokoa, arakaraka ny hafainganam-pandeha nofantenana, mety tsy azo ny feo. Amin'ireny tranga ireny, ny tsara indrindra azontsika atao dia esory ny feo amin'ny video. Azontsika atao ihany koa ity dingana ity amin'ny iMovie nefa tsy mila mampiasa rindranasa an'ny antoko fahatelo.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony dia tsy hisy fiantraikany amin'ny clip voafantina fotsiny ireo fiovana ireo tsy ny tetikasa manontolo.
Ity fampiharana ity koa eAzo alaina ho an'ny iPhone sy iPad izy io, miaraka amin'ny fiasa mitovy, ka raha mirakitra an-tsoratra amin'ny iPhone ianao, dia azonao atao ny manafaingana ny horonan-tsary mivantana amin'ny findainao nefa tsy mila mamindra azy ireo amin'ny Mac.
Miresaka momba ny VLC indray isika, ny, araka ny lazaiko foana, mpilalao horonantsary tsara indrindra eny an-tsena ho an'ny tsirairay amin'ireo sehatra finday sy desktop eny an-tsena, tsy noho izy mifanaraka amin'ny endrika tsirairay, fa koa satria maimaim-poana tanteraka sy loharano misokatra.
VLC dia iray manontolo. Ho fanampin'ny famelana antsika hilalao izay rakitra na rakitra mozika, dia misy fiasa fanampiny toy ny fahafahana manala ny feo amin'ny horonan-tsary, misintona horonantsary YouTube...
Momba ny safidy playback, VLC mamela antsika manafaingana ny famerenana horonan-tsary, na dia tsy afaka manondrana ny vokatra amin'ny rakitra toy ny hoe vitanay amin'ny iMovie aza izahay, ka ity fampiharana ity dia mety tsara raha hita ao amin'ny clip misy ireo horonan-tsary noraketinay ary tiantsika hampidirina ao anaty horonan-tsary famintinana.
Para manafaingana ny fandefasana horonan-tsary amin'ny VLC, tsy maintsy manao ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Raha vantany vao nosokafanay ny horonan-tsary miaraka amin'ny fampiharana na avy amin'ny fampiharana, dia mankany amin'ny menio izahay fandikana hita eo an-tampon'ny fampiharana.
Ao anatin'ity menio ity dia mitady ny safidy isika hafainganam-pandeha ary mifidiana Faster na Faster (marina). Ity safidy farany ity dia ahafahantsika manitsy ny hafainganam-pandehan'ny playback ho haingana kokoa na miadana kokoa.
Ianao dia afaka misintona VLC maimaim-poana tanteraka ho an'ny macOS amin'ny alàlan'ny ity rohy ity
Tonian-dahatsary iray hafa, izay noresahintsika tao amin'ny Soy de Mac teo aloha izay azontsika ampiasaina hanitsiana horonan-tsary raha tsy mifanaraka amin'ny iMovie ny Mac antsika dia Cute Cut, Cute Cut izany. Ity fampiharana ity, amin'ny dikan-teny maimaim-poana, dia mamela antsika hanova ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary.
iMovie dia mitaky macOS 11.5.1 hankafy ny fiasa rehetra atolony, na izany aza, azontsika atao misintona dikan-teny taloha amin'ny solosaina izay tantanan'ny dikan-teny teo aloha, saingy misy fetrany.
Raha toa ka taona vitsivitsy ny ekipanao, folo taona mahery, ohatra, dia azo inoana fa izany tsy afaka misintona iMovie amin'ny dikan-teny rehetra.
Cute Cut, miasa toy ny OSX 10.9Araka ny hitantsika amin'ny famaritana, dikan-teny natomboka mihoatra ny 20 taona lasa teo amin'ny tsena.
Para ovao ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary miaraka amin'ny Cute Cut, tsy maintsy manao ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Mba hanafainganana na hampiadana ny fandefasana horonan-tsary miaraka amin'ny Cute Cut, dia tsy maintsy, toy ny amin'ny iMovie, mifidy horonan-tsary izay tiantsika hanafaingana.
Manaraka, mandeha any amin'ny ambony ankavanan'ny fampiharana, izay ahitana ny fanitsiana rehetra azontsika atao amin'ny clip voafantina.
Amin'ity fizarana ity, karohy ny mpifidy aseho eo akaikin'ny teny hoe Haingam-pandeha ary afindrao miankavanana mba hampitombo ny hafainganam-pandehan'ny playback.
Tahaka ny amin'ny iMovie, amin'ny Cute Cut dia afaka manova ny hafainganam-pandehan'ny horonan-tsary na clip tsirairay isika amin'ny fomba mahaleo tena, tsy misy fiantraikany amin'ny horonan-tsary manontolo.
Ny fetra izay hitantsika ao amin'ny dikan-teny maimaim-poana dia ny hoe afaka ihany isika manova horonan-tsary miaraka amin'ny halavany 60 segondra ary misy watermark misy azy.
Cute CUT - Mpamorona sarimihetsikamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fametrahana horonantsary mihetsika haingana amin'ny Mac
Ny iMac 27-inch manaraka dia hanana tontonana LCD ary tsy misy miniLED araka ny DigiTimes
Ny iMac 27-inch vaovao dia hanampy loko hafa kely amin'ny ankehitriny